ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) Thursday, 03 November 2016
လူတော်လူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရန်အတွက် ပြည့်စုံရမည့်အချက်များကိုရှာဖွေလေ့လာမည်ဆို လျှင် ပါရမီဆယ်ပါး၊ မင်းကျင့်တရားဆယ်ပါး၊ နာယကဂုဏ်ခြောက်ပါး၊ သူတော်ကောင်းလက္ခ ဏာခုနစ်ပါးစသည့်အချက်များကို မြန်မာ့ရိုးရာ ရှေးဟောင်းစာပေများတွင် တွေ့မြင်နိုင်လေသည်။ သိရုံသက်သက်မျှထက်ကျော်လွန်၍ လက်တွေ့ ဘဝ၌လိုက်နာကျင့်သုံးကြည့်မည်ဆိုလျှင် ကျင့်သူ သည်ကျင့်သလောက်အမှန်တကယ်ထိရောက်သည့် ကောင်းကျိုးတို့ကိုရနိုင်ပေသည်။
မျက်မှောက်ခေတ်တွင်ကား ခေါင်းဆောင်မှု ပညာသည် လက်တွေ့လေ့လာချက်သုတေသန များနှင့်ပိုမိုထွန်းကားကျယ်ပြန့်လာသည်ဟုဆိုနိုင် ပါသည်။ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးနယ်ပယ်စသည်တို့တွင် အပြိုင်အဆိုင် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြရသဖြင့် ဤဘာသာရပ် အပေါ်တွင် စိတ်ပါဝင်စားမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု လည်းပိုမိုများပြားလာကြောင်းတွေ့ကြရပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းမှ စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်း ကုမ္ပဏီကြီးများသည် ယှဉ်ပြိုင်အနိုင်ယူနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားမှာ နိုင်ငံတကာ နှင့်ယှဉ်ပြိုင်၍အနိုင်ရမှ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်းက ဆက် လက်ရှင်သန်နိုင်ကြမည်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ပြိုင် ဆိုင်မှုပြင်းထန်သော (၂၁)ရာစုကာလတွင် ခေါင်း ဆောင်မှုပညာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်စာတမ်းများလည်း နိုင်ငံတိုင်းမှာ အရေအတွက်များစွာ ထွက်ခဲ့ကြ လေသည်။
လတ်တလောထွက်ရှိနေသော စာအုပ်စာရင်း နှင့်စာအုပ်ဆိုင်များမှာ သီးသန့်ပြသထားသည့် ယခုလထွက်ရှိစာအုပ်များကို စာရေးသူသည် စာအုပ်ဆိုင်သို့ရောက်တိုင်းလေ့လာကြည့်၏။ ဆရာ မောင်ပေါ်ထွန်း၊ ဆရာမောင်မြင့်ြ<ွကယ်၊ ဆရာဦး လှမင်း၊ ဆရာမြတ်ငြိမ်း၊ ဆရာတင်မောင်မြင့်၊ ဆရာညီညီနိုင်၊ ဆရာမင်းဗထူးစသည်တို့ဘာသာ ပြန်သောစာအုပ်မျိုးကို တတ်နိုင်သမျှစုဆောင်း ဝယ်ယူပါ၏။ အချိန်ရသမျှလေ့လာမှတ်သားပါ ၏။ မူရင်းတစ်အုပ်တည်းကို မြန်မာဘာသာသို့ နှစ်ယောက်သုံးယောက်ပြန်လျှင် ထိုမူနှစ်မျိုးသုံး မျိုးကိုဝယ်ဖတ်၏။ စာမူခလေးတွေလစဉ်ရသမျှ စာအုပ်ဖိုးနှင့်ကုန်သွားလေ၏။ ရှာရတာပျော် သည်။ ဖတ်ရတာကြည်နူးသည်။ ဝါသနာ။
တကယ်တော့စာရေးသူတို့အရွယ်သည် ၆ဝ ကျော်ခဲ့ပြီ။ ဘဝတစ်ခုကိုနေ့ရက်၏ပထမဆုံးကူး ပြောင်းစ၊ ညဉ့်သန်းခေါင်ကျော်မှစတင်ရေတွက် ကာတစ်ရက် ၂၄နာရီသတ်မှတ်ပါက(၈ဝသက် တမ်းမှာ ၆ဝကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်သဖြင့် ညနေ ၆နာရီ ကျော်ခဲ့ပြီ)နေဝင်ရိုးရီမှောင်လုပြီ။ တိမ်တောက်ချိန် ရောက်ခဲ့ပြီ။ နေလုံးလည်းကွယ်ခဲ့ပြီ။ မကြာမီ မှောင်ပါတော့မည်။
ဘဝ၏နေ့အလင်းရောင်ကာလများကုန်လွန် ၍သွားခဲ့ကြပါပြီ။ မိမိအတွက်အမှောင်ထုအတွင်း အိပ်စက်အနားယူရင်းဇာတ်သိမ်းသွားဖို့သာဖြစ်ပါ ၏။
ဒါဖြင့်ဘာလို့ ဒါလောက်စိတ်ပါလက်ပါစာ တွေကိုဖတ်နေရေးနေရတာလဲဟု မေးစရာရှိပါ၏။
သားတွေမြေးတွေ၏ခေတ်မှာ မိမိတို့ဖြတ် သန်းခဲ့ရသည့်အချိန်ကာလထက် ပိုမိုလှပသာယာ သောအခြေအနေလေးကိုတည်ဆောက်နိုင်စေချင် သည်။ ရောက်ရှိစေချင်သည်။ အချမ်းသာကြီး ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်းမဟုတ်တောင် ဆင်းဆင်းရဲရဲမွဲမွဲ တေတေတော့မနိမ့်ကျနေစေချင်။ ရုန်းရင်းကန်ရင်း နှင့် ၂ဝ၁၈ခုနှစ်လောက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအနိမ့်ကျဆုံး နိုင်ငံစာရင်းက လွတ်မြောက်စေချင်သည်။
ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံစာရင်းထဲဝင်လာလျှင်ပဲ အသက် ရှူတော်တော်ချောင်လာနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ရုပ်ဝတ္ထု ပစ္စည်းတွေက နေ့ချင်းညချင်းဘုံပေါက်သလို ပေါ်ပေါက်လာအောင် တည်ဆောက်၍ရပါသည်။ ၂ဝဝ၈ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်အထိ ၁ဝနှစ်တာလောက် အတွင်း စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ကုန် သွယ်ရေး၊ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး စသည့်ဘက် ပေါင်းစုံတွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်အောင် ထိုးထွက်နိုင်ခဲ့ကြသည်ကို တွြေ့မင်ရ၏။
နိုင်ငံတကာကပင် တအံ့တသြ ချီးကျူးခဲ့ကြ ရပါ၏။ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ၏ နောက်ပိတ် ဆုံးမှ အပြေးအလွှားဖြတ်ကျော်တက်လာပုံ အရှိန် အဟုန်အား အံ့အားသင့်ခဲ့ကြရ၏။ ဥပမာ-၂ဝ၁ဝ က ၃ ရာခိုင်နှုန်းပင်မရှိခဲ့သော လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုနိုင်သူဦးရေသည် ၂ဝ၁၅ မှာ ၈၅ ရာခိုင် နှုန်းကျော်မှ ၉၃ရာခိုင်နှုန်းအထိ ခုန်ပျံပြီးရောက်ရှိ သွားလေ၏။
ခေါင်းဆောင်မှုပညာပိုမိုထွန်းကားပြီး ထိပ် ပိုင်းမှအောက်ခြေအထိ ခေါင်းဆောင်မှုအရည် အသွေးများ ပြည့်ဝရန် လိုအပ်၏။ ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ချုပ်မှ ညစောင့်အထိ ခေါင်းဆောင်မှုကို သိရ မည်။ ကျင့်ရမည်၊ မျှဝေရမည်။ တိုးတက်နေ အောင် လေ့ကျင့်ကြရမည်။ သမ္မတမှဆယ်အိမ်မှူး အထိ သိရမည်။ ကျင့်ကြရမည်။
ခေါင်းဆောင်မှုသည် အတတ်ပညာ၊ အနု ပညာ။ ခေါင်းဆောင်မှု၏ မရှိမဖြစ်အနှစ်သာရ တစ်ခုမှာ စံနမူနာပြသနိုင်ရမည်။ မှန်သောအလုပ် ကို ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်တတ်ရမည်။ ခေါင်းဆောင် က ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုသည့်အချက်ကို မှန်ကန်စွာ ရွေးချယ်ပေးပြီးပါက လက်အောက်ခေါင်းဆောင် အဆင့်ဆင့်သည် မိမိတို့ဘာကိုလုပ်ရမည်။ ဘယ် လိုလုပ်ရမည်တို့ကို သိမြင်ထားကြရမည်။
ခေါင်းဆောင်ကWhat to do လမ်းညွှန်မည်။
စီမံသူများက How to doဆာင်ရွက် ရမည်။
လက်အောက်ငယ်သားများကWhat to do ကို သိရလုပ်ရမည်။Why to do ကို နားလည် သိမြင်ကြရပါမည်။
အောက်ပါအချက်ခုနစ်ချက်မှာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုယန္တရားအဆင့်ဆင့်တွင် ပါဝင်နေ ကြသော လူကြီး၊ လူလတ်၊ လူငယ်အားလုံးတို့ တွင် (ယခင်ကမရှိခဲ့သေးလျှင်ရှိအောင်) လုပ် ဆောင်စေလိုသည့် အလေ့အထများ ဖြစ်ကြပါ သည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ် မေလက စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် ကထိက ဆရာခင်မောင်ညို (ဘောဂဗေဒ)ဘာသာ ပြန်ခဲ့သော စတီဖင်ကိုဗေး၏ 'နိယာမဗဟိုပြု ခေါင်းဆောင်မှု'ဟူသောစာအုပ်မှ ကောက်နုတ် ကူးယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါ၏။ လွန်ခဲ့သောအနှစ်၂ဝ ခန့်က ဘာသာပြန်ထားခဲ့သည့် စာအုပ်ပင်ဖြစ် သော်ငြားလည်း စတီဖင်၊ အာရ်၊ကိုဗေးStephen. R, Covey (1932-2012) ၏စာအုပ်များစွာအနက် ဖတ်သင့်သော စာအုပ်တစ်အုပ် ဖြစ်ပါသည်။ လွှတ်တော်အမတ်များဖတ်လျှင်လည်း ပြည်သူနှင့် ပိုမိုထိတွေ့နားလည်စေနိုင်မည်။ ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိများဖတ်ရှုလျှင်လည်း လုပ်ငန်းခွင်မှာ အဆင်ပြေချောမွေ့စေလိမ့်မည်။
စာရေးသူကမူ ကောင်းနိုးရာရာကို ရှာဖွေ ကောက်နုတ်ပြီး အကျဉ်းမျှတင်ပြရုံသာ စွမ်းနိုင် ပါသည်။
၁။	ပထမအလေ့အထ။ ထကြနိုးကြားမှုရှိရန်
မြန်မာ့ရိုးရာအစဉ်အလာ နာယကဂုဏ်ခြောက် ပါးအနက်မှာလည်း ထထကြွကြွရှိခြင်းသည် ပထမဆုံးသော အင်္ဂါရပ်ဂုဏ်ဖြစ်နေပါ၏။ စတီဖင် ကိုဗေးသည် မြန်မာတို့ဆီက နာယကဂုဏ်မှကူး ယူခိုးချခဲ့ပုံရပါ၏။ (ချစ်လို့စတာပါ)
သူကတော့ ဤအရည်အသွေးကို ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ်နားလည်သိရှိခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဂရုစိုက် မိခြင်းကို ဆိုလိုသည်ဟု ပြောပါ၏။ အစဉ်အမြဲ လေ့လာသင်ယူနေရမည်။ ကောင်းသည်ထက် ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်နေရမည်။ စိတ်အားထက် သန်နေရမည်။ တာဝန်ယူရဲရမည်။ တာဝန်ကိုရှောင် လွှဲခြင်းမပြု။ အခက်အခဲနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကို ရင် ဆိုင်ရဲသည်။ အတားအဆီးများကို ဖြတ်ကျော်နိုင် သော တီထွင်ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိသည်။
၂။	ဒုတိယအလေ့အထ။ စိတ်ထဲမှာရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ထားပြီး အလုပ်ကိုစရန်
အစီအစဉ်ရေးဆွဲမည်၊ ဘာလုပ်ရမည်ကိုရွေး ချယ်ဆုံးဖြတ်ရမည်။. ဝန်ဆောင်မှုကိုဦးတည်ရ မည်။ ပန်းတိုင်၊ လမ်းကြောင်း၊ ရည်မှန်းချက်များ တိတိကျကျစဉ်းစားထားရမည်။ အနာဂတ်ကို ကြိုတင်မြင်နိုင်အောင် ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရမည်။ ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုဖြင့် ဇွဲရှိရှိအားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ဆောင်လျှင်အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝသော အလုပ် တစ်ခုမဟုတ်ပါလား။ ပါဝင်ပူးပေါင်း အားပေး သူများနှင့် အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။
၃။	တတိယအလေ့အထ။ အရေးကြီးဆုံးအလုပ် ကို ဦးစွာလုပ်ရန်
စိတ်စွမ်းအားဖြင့် အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေရ မည်။ ကိုင်းဖျားကိုင်းနားကိစ္စအသေးအမွှားများ ဖြင့် အချိန်ကုန်မနေစေရ။ လာမယ့်ဘေးပြေးတွေ့ လိုက်ပါ။ အညှာအကျဆုံးအကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။ မိမိတို့နိုင်ငံချွတ်ခြုံကျအောင် ဆင်းရဲမွဲ တေနေရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။ လက်နက်ကိုင် ဆူပူနှောင့်ယှက်မှုများ၊ တရား ဥပဒေချိုးဖောက်မှုများကြောင့် အရင်းခံဖြစ် နေ သည်။မူးယစ်ဆေးဝါး၊ မှောင်ခို၊ မသမာစီးပွား၊ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားမှု၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှု၊ ပညာရေးနိမ့်ကျမှု၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ နည်းပါးမှု၊ လူသားစွမ်းရည် အရင်းအမြစ်ချို့တဲ့မှု စသည် စသည်တို့သည် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးရ ခဲ့သည်ရှိသော် အားလုံးပင်ရေမြင့်ကြာတင့်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာကြမည်။
တစ်ဗိုလ်တစ်မင်း၊ တစ်တောတစ်ကြက်ဖ တွန်နေကြခြင်းဖြင့် လက်နက်ကိုင်သောင်းကျန်းမှု ရှိနေသမျှ အိတ်ပေါက်နှင့်ဖားကောက်သကဲ့သို့ ရှိနေဦးမည်။အခြေအမြစ်ကျသောအရင်းခံပြဿ နာကို ဖုံးကွယ်ရှောင်လွှဲမနေဘဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း ရမည်။
သင့်လျော်ရာပရိယာယ်ဝေဝုစ်များဖြင့်ရှင်းလင်း ဖယ်ရှားပစ်နိုင်လျှင်အောင်မြင်မည်။ တိုက်ပွဲများ မရှိတော့ဘဲ ငြိမ်းချမ်းလုံခြုံစေရမည်။
၄။	စတုတ္ထအလေ့အထ။ သူလည်း အကျိုးရှိ ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိရာတွေးရန်
လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ်ဖြင့် တော်လှန်ပုန်ကန် နေသမျှ ဆင်းရဲမွဲတေသေကြေကြရုံမျှအပ ဘာမှ ကောင်းကျိုးမရကြောင်း သင်ခန်းစာကောင်းစွာ ရသင့်ပြီ။ ပြောင်းလဲချိန်တန်ပြီ။ သူနိုင် ကိုယ်ရှုံး၊ သူရှုံး ကိုယ်နိုင်၊ ရန်သူအဖြစ်ရန်မူနေကြခြင်းဖြင့် နိုင်ငံဆင်းရဲတွင်းနစ်ခဲ့ပြီ။ျွှငည-ျွှငညွှ့နသမပ သူလည်းကောင်းကျိုးရ၊ကိုယ်လည်းကောင်းကျိုးရ စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးကြ လျှင် အောင်မြင်ကြပါမည်။ စိတ်ထာြး<ွကယ်ဝ ရမည်။
၅။	ပဉ္စမအလေ့အထ။ ပထမဦးစွာ နားလည်ဖို့ ကြိုးစားရန်၊ ထို့နောက်မှ ကိုယ့်အခြေအနေကို သူနားလည်စေရန် အသိပေးညှိနှိုင်းရန်
သူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်အပြန်အလှန်နားလည်မှု၊ ယုံကြည်မှု၊ စာနာမှု၊ တည်ဆောက်ကြရမည်။တိုက်တာ၊ ခိုက်တာ၊ သတ်တာဖြတ်တာများဖြင့် အဖြေမထွက်။ဘယ်သူ့ဘက်မှာမှ အမြတ်မရ။ ငါဟု မစဉ်းစားရ။ ငါတို့အားလုံးဟု ခံယူစဉ်းစား တတ်ကြရမည်(သြအှု)ျွှန ဟု သုံးနှုန်းပါ။ အားလုံးပါပါစေ။
၆။	ဆဋ္ဌမအလေ့အထ။ စုစည်းမှုစွမ်းအားကို သုံးရန်
ပဲ့ကနင်း ဦးကထောင်၊ ဦးကိုနင်း ပဲ့က ထောင်ဟူသော မညီမညွတ်ဖြင့် ဝါးအစည်းပြေ သလိုဖြစ်လျှင် အင်အားမရှိ။ ပြည်ထောင်စု အတွင်း အင်အားနည်းနေခဲ့သော် ပြင်ပမှအနိုင် ကျင့်လိုသူများ၊ ဒူးတင်ပေါင်တင်စော်ကားချင် သူများ၊ အားရဝမ်းသာဖြစ်ကြမည်။ မိသားစု ကဲ့သို့စည်းလုံးညီညွတ်ကြလျှင်ခိုင်မာကြီးမားသော အင်အားထုကို ရလေ၏။ မည့်သည့် ရန်သူမှ မကျူးကျော်ရဲပေ။
စည်းလုံးညီညွတ်ဖို့က နားထောင်တတ် ရမည်။
တီထွင်ဖန်တီးမှုရှိရမည်။ အသစ်အသစ်များ တိုးပွားပေါ်ထွန်းစေရမည်။ ချစ်ခြင်းအရင်းခံရှိ ကြရမည်။
အတင်းမပြောရ။ အချင်းချင်းမကောင်း သတင်းမပြောဆိုရ။ သစ္စာရှိရမည်။ ချစ်ခင်စည်း လုံးရမည်။
၇။	သတ္တမအလေ့အထ။ ကိုယ့်လွှကိုယ်သွေးရန်
အချိန်တိုင်းကြိုးစားအားထုတ်၍ လေ့ကျင့် သင်ယူနေခြင်း၊ လွှကိုသွေးသကဲ့သို့ အရည် အသွေးများမြှင့်တင်နေကြခြင်းရှိကြရမည်။ တိုး တက်နေအောင်၊ ဆန်းသစ်နေအောင် တစ်ချိန်လုံး တီထွင်နေရမည်။ ရပ်တန့်မနေရ၊ ကျေနပ်နှစ်သိမ့် မနေရ။ မှေးလိုက်မနေရ။ စွမ်းရည်စွမ်းအားများ မြင့်မားလာအောင် အမြဲတစေဖြည့်ဆည်းတည် ဆောက်နေကြရမည်။
အလေ့အထကောင်းများကို ဖော်ပြလှစ်ဟခဲ့ ပါပြီ။ အပ်ဖျားရေစက် အနက်ပင်လယ်ဖြစ်ပါ သည်။ ကျင့်သုံးပါက ကြီးမားသောကောင်းကျိုး တရားရကြပါလိမ့်မည်။ အသုံးချသူအတွက် ပတ္တမြားဆန်ကျိုးပါ။